Daraasiin Dad ah oo lagu dilay Koonfurta Sudan. – SBC
Daraasiin Dad ah oo lagu dilay Koonfurta Sudan.
Wararka ka imaanaya Koonfurta dalka Suudaan Ayaa ku warayama In ku dhawaad 47 qof lagu dilay Koonfurta Dalka Suudaan qilaafaad dhanka qaba’ilka ah oo halkaasi ka taagan maalmihii ugu danbeyay.
Koox hubeysan oo ka tirsan qabiilka la yiraahdo Murle ayaa weerar ku qaaday Deegaano ku yaala Gobolka Jonglei oo ka tirsan Koonfurta Suudaan halkaasi waxaa ay ku dileen dad iskugu jira Haween iyo Caruur aad u faranadan waxaana sidoo kale ay waxyeelo u geysteen dhismayaal deegaanka kuyaalay.
Mr Philip Thon Leek Deng oo xubin ka tirsan baarlamaanka Dalkaasi ayaa sheegay in kooxda hubeysan ee weerarka soo qaaday ay geysteen waxyeelo iskugu jirta dil iyo burburin hanti ay leeyihiin dadka deegaanka
Qalalaasaha Dhinaca Qabaa’ilka ee ka taagan wadanka Koonfurta suudaan ayaa sababay ku dhawaad 60,000 oo qof ay iskaga barakacaan deegaanada ay xiisadaha dagaalka jiraan iyaga oo ka cabsi qaba in ay saameyn ku yeelayto Xaaladaha Jira.
Kooxaha Xiisadu u dhaxeyso ayaa waxaa ay kala yihiin Murle iyo Lou Nuer kuwaasi oo ah qabaail wada degan Deegaanadaas waxaana xiisadooda ku dhexjiray Ciidamada Suudaan iyo Ciidamo ka socda Qaramada Midoobay wallow xiisadu ay tahay mid sii socota.
Xiisadaha Xilligan taagan ayaa ku soo beegmaya ka dib markii koonfurta dalkaasi suudaan uu xornimada qaatay wixii ka danbeeyay Bishii july ee sannadkii tagay iyadoona koonfurtu ay ka go’aday sudaan inteeda kale.